अर्बपतिको सूचीमा घरजग्गा व्यवसायीको बर्चश्व, विश्वका १० घरजग्गा व्यवसायी कस्को सम्पति कति ? « Clickmandu
अर्बपतिको सूचीमा घरजग्गा व्यवसायीको बर्चश्व, विश्वका १० घरजग्गा व्यवसायी कस्को सम्पति कति ?
एजेन्सी । नेपालका घरजग्गा व्यवसायीहरु धमाधम टाट पल्टिरहेका छन् । नेपालका ठूला घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतले आफ्नो व्यावसायिक करियर नै गुमाए ।
राजेन्द्र शाक्यलगायतका व्यवसायीहरु भने जसोतसो बचे । अर्बपति बन्ने सपना साँचेर घरजग्गा व्ययवसायमा हाम फालेका नेपाली व्यवसायीहरु उल्टै टाट पल्टिए ।
तर, विश्वमा भने घरजग्गा व्यवसायीहरु नै ठूला धनाड्य बन्ने गरेको एक तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । प्रख्यात अमेरिकी म्यागेजिन फोब्र्सले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको विश्वका अर्बपतिको सूचीमा घरजग्गा (रियल स्टेट) व्यवसायीको वर्चश्व रहेको छ ।
विभिन्न विधामा फोब्र्सले अर्बपतिको सूची सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यो वर्षको अन्य विधालाई पछि पार्दै रियल स्टेटतर्फका २ सय ४३ रियल स्टेट व्यवसायी अर्बपतिको सूचीमा दरिएका छन् ।
विश्वका अर्वपतिको सूचीमको २६औं स्थानमा रहेका चिनियाँ नागरिक वाङ जियानलिन पनि रियल स्टेट व्यवसायी हुन् । उनको सम्पत्ति ३० बिलियन डलर रहेको छ । त्यस्तैगरी अर्वपत्ति सूचीको ४३औं नम्बरमा रहेकी चिनियाँ नागरिक याङ हुयान पनि रियल स्टेट व्यवसायी हुन् । उनको सम्पत्ति २१.९ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
अर्बपतिको सूचीमा १ सय २७औं स्थानमा रहेका जर्मनीका एलेक्सजेन्डर ओटोको सम्पति ११.८ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । उनी पनि रियल स्टेट व्यवसायी हुन ।
पूर्वी चीनको यान्ताईमा विश्व औद्योगिक डिजाइन सम्मेलन हुँदै
एजेन्सी । विश्व औद्योगिक डिजाइन सम्मेलन पूर्वी चीनको सान्डोङ प्रान्तको तटीय शहर यान्ताईमा अक्टोबर २२
अमेरिकी खुद्रा बिक्रीमा झिनो वृद्धि
एजेन्सी । अमेरिकामा कार बिक्रीमा देखिएको तीब्र गिरावटको बाबजुद अगस्टमा अमेरिकी खुद्रा बिक्रीमा ०.७ प्रतिशतले